Kasịta mma mechiri emechi maka onye nrụpụta na ụlọ ọrụ |Kangua
Catheter suction emechiri emechi maka otu ojiji
Kateta mmiri mechiri emechi nwere ngbanwe njikwa (ụdị na-eme ogologo oge)
Kateta mmiri mechiri emechi nwere mgbanwe njikwa (ụdị ọkọlọtọ)
1. Ọ nwere ike nweta ikuku oxygen na-aga n'ihu na-enweghị nkewa nke sekit artificial.
2. Ngwunye plastik a na-ejikarị eme ihe nke catheter suction nwere ike ịzenarị ọrịa nke nje ndị dị n'èzí kpatara.
3. Mgbe sputum suction tube hapụrụ ụzọ ikuku wuru, ikuku ikuku nke ikuku agaghị emetụta.
4. Catheter suction mechiri emechi nwere ike ibelata nsogbu ndị ahụ yana ibelata nrụgide akụkụ ikuku oxygen sitere na mmiri ara, nke na-ezere ọrịa gafere nke ọma.
Ọdịmma nke catheter suction mepere emepe
N'ime usoro mmịpụta sputum ọ bụla, a ga-ekewapụ ụgbọ elu artificial na ikuku ventilashị, a ga-akwụsị ikuku ventilashion, na tube nke sputum ga-ekpuchi ikuku maka ịrụ ọrụ.Mmanya mepere emepe nwere ike ibute nsogbu ndị a:
1. Arrhythmia nnyonye anya na ọbara oxygen dị ala;
2. N'ụzọ dị ịrịba ama belata nrụgide ikuku, ụda olu na ikuku oxygen saturation ọbara;
3. Mmetọ ikuku na gburugburu ebe obibi;
4. Mmepe nke oyi baa na-ejikọta ventilator (VAP).
Uru nke catheter suction mechiri emechi
Ọ nwere ike dozie nsogbu ndị a dị ka nkwụsị nke ọgwụgwọ ventilashị, ọrịa obe na mmetọ gburugburu ebe obibi:
1. Ọ dịghị mkpa ka ekewapụ ya na sekit respiration artificial maka ikuku oxygen na-adịgide adịgide.
2. A na-eji eriri mmiri kpuchie sputum suction tube nke a na-ejikarị eme ihe iji zere kọntaktị na ụwa dị n'èzí.
3. Mgbe amịchara sputum, sputum suction tube na-ahapụ ụzọ ikuku wuru na agaghị egbochi ikuku gas nke ikuku ventilashị.
4. Ekpuchi sputum suction tube nwere ike budata ibelata mgbagwoju anya nke sputum suction, zere mbelata nke oxygen ele mmadụ anya n'ihu mgbali kpatara ugboro ugboro n'èzí sputum mmiri, na n'ụzọ dị irè zere cross ọrịa.
5. Melite ọrụ ndị nọọsụ na-arụ ọrụ nke ọma.E jiri ya tụnyere oghere sputum na-emeghe, ụdị nke mechiri emechi na-ebelata ọrụ nke imepe oghere sputum suction tube na nkwụsịtụ ikuku ventilashị, na-eme ka usoro nsị sputum dị mfe, na-azọpụta oge na ike mmadụ ma e jiri ya tụnyere oghere sputum mepere emepe, na-eme ka ọrụ ndị nọọsụ na-arụ ọrụ nke ọma, na nwere ike ịzaghachi mkpa nke ndị ọrịa n'oge.Mgbe ị na-amụ 149 mechiri emechi suction na 127 na-emeghe suction na 35 ọrịa bi na ICU mgbe trauma, a na-akọ na nkezi oge nke mechiri emechi suction na dum usoro nke ọ bụla ọrụ bụ 93s, mgbe nke na-emeghe suction bụ 153S.
Nke gara aga: Uwe mwepu nke anaghị kpara akpa
Osote: Ihe njide Endotracheal Tube enwere ike iwepu ya na Cuff
catheter suction mechiri emechi
catheter emechi emechi (24H)
catheter emechi emechi (72H)
ọkọlọtọ mechiri emechi suction catheter
Ugboro abụọ Lumen Silicone Laryngeal mkpuchi ụgbọ elu
Onye na-ebunye ihe mkpuchi ụgbọ elu PVC Laryngeal nwere ike ịtụfu
Ihe njide Endotracheal Tube enwere ike iwepu ya na Cuff